Semalt Presents The Articles Stringest Wiki Ever
Mora ny miditra ao amin'ny tranokala wiki raha mikaroka ny Wikipedia. Azonao atao ny mikaroka ireo mpilalao sarimihetsika izay nanao ny anjara asa tsara indrindra tao amin'ny horonan-tsary Hollywood, ary avy eo nikaroka ny vadin'izy ireo ianao ary nahita fa tsy nandeha tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa izy ireo ary nanomboka vao maraina be ny asany. Nankalaza ny faha-15 taonany ny Wikipedia, ary ny tranonkala dia manomboka manome fampahalalana ho an'ny ankizy manao ny andraikiny sy ny devoara. Miaraka amin'ny antonta sy fanazavana marobe eo amin'ny rantsana, eto, Oliver King, ny Semalt Manager Success Manager, no nanasongadina ny lahatsoratra mahaliana indrindra amin'ny wiki rehetra:
Vladimir Demikhov dia mpahay siansa malaza sy nahaleo tena izay nanambara ny foto-kevitra momba ny fandrindrana taova. Nanomboka ny 1930 hatramin'ny 1950, dia nanao fanandramana vitsivitsy izy ary nafindra fo tao am-pon'ny olona iray. Tatỳ aoriana, dia nafindrafindra ny lohan'ny alika. Nandritra ny taona 1960, io mpahay siansa io dia afaka nanindrahindra lohan'olona iray, ka navadika ho biby roa. Maro no mino fa ny Dr. Robert White, izay neurosurgeon izay namolavola ny fanondranana lohan'ny gidro, dia nanaitra ny asan'i Deminkhov.
Hita tao amin'ny efitranon'i Londres ny vatan'ny fatin'i Carol Vincent, izay toa hita fa hafahafa sy tsy mahazatra toy ny fatin-koditra toy ny laingany nandritra ny telo taona mahery. Noho ny fandoavam-bola nomena azy, ny fahitalavitra sy ny fanamafisam-peo dia nihazakazaka, ary ny ampahany tamin'ny hofan-dry zareo dia nomena, nino ny rehetra fa velona i Joyce. Andro maro talohan'ny nahafatesany dia nanapaka ny fifandraisana tamin'ireo havany sy namany ny zatovovavy.
3. Jennifer sy June Gibbons
Mpinamana mahafinaritra izy ireo izay nanenina ny fihetsiketsehana ary nifampiresaka tamin'ny fomba izay tsy ho takatry ny olona mihitsy. Na dia teo aza ny fanandramana hanasaraka azy ireo amin'ny alàlan'ny fandefasana azy ireo any amin'ny sekoly isan-karazany, dia Nipoitra tsikelikely ny fahasalamana ary maty tamin'ny fangirifiriana i Jennifer ary niaina fiainana tsy tapaka taorian'io izy ireo (tamin'ny volana febroary lasa teo). 10)
Nahazo laza aman'olona io lehilahy alemà io noho ny famonoan'olona iray izay nanolo-tena an'i Armin tao amin'ny aterineto. Namoaka dokambarotra tao amin'ny tranokala The Cannibal Café izy, ary nilaza i Meiwes fa mitady olona hovonoina sy handoro azy izy. Lehilahy iray avy any Berlin, Bernd Jürgen Armando, dia namaly ny dokambarotr'i Miewes ary nanamboatra ny penis Brandes ary nanamboatra azy tsara.
5. Ny fahaterahan'i Coffin
Heverina ho heverina ho fetalin'ny fetal-tsokajiny izany ary anisan'ny tantaran'ny vehivavy bevohoka. Noho ny proteinina maoderina maoderina sy ny fanafody fitsaboana maoderina, tranga toy izany no mitranga. Saingy tamin'ny taon-jato faha-15, ny tompon'andraikitra ara-pitsaboana dia nitatitra fa nisy ny tranga toy izany.
Hita eto ny sarin'ny Roanoke, ary ny fiakarana dia an'i Caroline Avaratra. Sir Walter Raleigh dia nandefa mpanjohy maherin'ny 100 ho fananganana tanàna iray tao amin'ny Bay Chesapeake. Io tanàna io dia tarihin'i John White. Rehefa nangatahana hitsidika an'i Roanoke ny White mba hanamarina ireo mpifindra monina, dia nahita kirety izy ary ny koloniana dia antsoina hoe Colony Very.
7. Ny lisitry ny fanjavonan'olombelona
Io lisitr'ireo fanjavonan'olombelona io dia ahitana olona marobe izay nanjavona tsy ho eto ambonin'ny tany, ary tsy misy mahalala ny lalana nodiavin'izy ireo Source .